MH Overview - Momba anay - Ningbo MH
Ningbo MH Industry dia niorina tamin'ny 1999, manandanja amin'ny akanjo akanjo sy fametahana fitaovana. Taorian'ny fandrosoana taona dia nanangana fifandraisana ara-barotra tamin'ny firenena mihoatra ny 150 ny MH, noheverina ho "Top 500 China Industry Industries" sy "Company AA Trustworthy" ny orinasa Mh, ary ny marika "MH" dia mahazo laza tsara amin'ny tsena anatiny sy ivelany .
Miaraka amin'ny fivoaran'ny 16 taona, ankehitriny ny MH dia manana tompo 3,500, 5 lehibe famokarana fototra (total 382000m2), miaraka amin'ny famokarana capacity hatramin'ny 1500tons / volana ho an'ny manjaitra tari-dresaka, 200tons / volana ho an'ny kofehy embroidery, ary 700,000y / volana ho an'ny dantelina lamba. MH dia nanangana fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'ireo mpanamboatra 1500 mihoatra ny 1000 hafa ny fitaovana maoderina.
Ny MH dia manana birao miandraikitra ny seranam-piaramanidina 40 any amin'ny firenena samihafa, hanomezana mpanjifa haingana ny serivisy eo an-toerana, miaraka amin'ny ERP, MH APP sy ny rafitra hafa an'ny IT, ny MH dia afaka manome tolotra manokana an'ny mpanjifa na aiza na aiza. Na inona na inona ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny MH, amin'ny alalan'ny mailaka, ny finday, ny telefaonina, ny APP IM na ny tarehy mivantana, dia afaka mahazo fahombiazana, fampandrenesana ary matihanina ny mpanjifa.
Ny MH dia hanao ezaka tsy tapaka hananganana fitaovana maoderina, hanomezana mpanjifa amin'ny karazana sokajy manontolo, mety amin'ny vidiny, ny famindrana amin'ny fotoana, ny vokatra ara-materialy mety tsara.
MH Overview Home Sokajy --Threads --Zippers - Ripona & Tape --Ropes --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming - Fanampiana fitaovana - Fitaovana & Accessories - Mamboatra machine & Parts --Fabric --Others Momba anay - MH Overview --MH Industrial --MH Tantara --Trade Shows - Our Agents --Image Galleries --Video Album Mifandraisa aminay - Toerana mahomby --Feedback Community --Blog --App --Avia ho namanay